Umaki: i-eloqua | Martech Zone
I-Chili Piper: Ukuvuselela Ukuhlela Kweqembu Lakho Lokuthengisa, Ikhalenda, Nebhokisi Lemilayezo Engenayo
NgoMsombuluko, Novemba 23, 2020 NgoMsombuluko, Novemba 23, 2020 Douglas Karr
I-Chili Piper yisixazululo sokuhlela esizenzakalelayo esikuvumela ukuthi ufaneleke ngokushesha, uhambise umzila, futhi ubhukhe imihlangano yokuthengisa ngemikhondo engenayo ehola lapho beguqula kuwebhusayithi yakho. I-Chili Piper Isiza Kanjani Amathimba Wokuthengisa Akusekho ukudideka kokuhola okusabalalisa ama-lead, akusekho ama-imeyili abuyela emuva nangama-voicemails ukuze nje ubhuke umhlangano, futhi angabe esalahleka amathuba ngenxa yokulandela kancane. Izici ze-Chili Piper Faka i-Chili Piper inikeza amathemba akho ngesipiliyoni esihle sokuhlelela
I-Sendoso: Khuthaza Ukuzibandakanya, Ukutholwa, Nokugcinwa Nge-Direct Mail
NgoLwesine, Juni 11, 2020 NgoLwesihlanu, ngoJuni 12, i-2020 Douglas Karr
Lapho ngisebenza epulatifomu enkulu ye-SaaS, enye indlela ephumelelayo esasiyisebenzisa ukuhambisa uhambo lwamakhasimende phambili kwakuwukuthumela isipho esiyingqayizivele nesibalulekile kumakhasimende ethu esihlosiwe. Ngenkathi izindleko zomsebenzi ngamunye zazibiza kakhulu, utshalomali lwalunembuyiselo engakholeki kutshalomali. Ngokuhamba kwebhizinisi phansi nemicimbi ikhanseliwe, abathengisi banezinketho ezithile ezinqunyelwe zokufinyelela amathemba abo. Ukungakhulumi ngeqiniso lokuthi izinkampani zishayela umsindo owengeziwe
Wonke umuntuKwezenhlalo yiyona ndawo ehamba phambili yokukhuthaza abasebenzi kanye nenkundla yokuthengisa enikezela ngamakhasimende ayo isilinganiso sokuxhuma esingu-1,750 ngomsebenzi ngamunye, ukwanda okungu-200% kwamapayipi okuthengisa, osayizi abakhulu besivumelwano abangama-48%, ukwanda okungu-4x kokuqwashiswa komkhiqizo, nangokweshumi kokukodwa izindleko kukhokhwe izinhlelo zokuxhumana nabantu. Kungani Ukugqugquzelwa Kwabasebenzi? Yonke inkampani inezinsizakusebenza ezinamandla, ezingasetshenziswanga ezinamandla okukhulisa ukumaketha, ukushayela ukuthengisa nokunika amandla i-HR; izwi namanethiwekhi wabasebenzi bakho. Kalula nje,
NgoLwesithathu, Agasti 22, 2018 U-Eric Holtzclaw
Ezinsukwini ezindala zokumaketha, emuva kuma-2000s okuqala, ama-CMOs ambalwa anesibindi atshale imali kwamanye amathuluzi okudala enzelwe ukusiza ukuphatha kangcono imikhankaso yabo kanye nezithameli. La maphayona aqinile afuna ukuhlela, ahlaziye futhi athuthukise ukusebenza, futhi ngaleyo ndlela adale ubuchwepheshe bokumaketha bokuqala- izinhlelo ezihlanganisiwe eziletha ukuhleleka, imikhankaso ebhekiswe ngqo, nemiyalezo eyenziwe yaba ngeyakho ukuthola imiphumela engcono. Uma kubhekwa ukuthi imboni yezokumaketha ifike kangakanani eminyakeni embalwa edlule